Namorona ny efatra minitra izy ireo “NYE Customized Countdown” in audio form. Then, a few years later into the highly acclaimed 4K, graphic-intense video countdown which has changed New Year’s Eve events all over the world.
Ny Countdown officiel NYE dia mamorona izany mahavariana izany “party-all-night” energy toerana. Dj mametraka izay mitazona ny vahoaka mandihy, miboridana ary misotro ny làlan-kizin'ny misasakalina mba hanatsarana sy hampitomboana ny tombony amin'ny bar!
Fantenao ny karazana countdown anao. Ampidiro ny sari-taninao, ny ampahany amin'ny feo, ny format an-drakitra, ary ny safidy hafa.